Tinye ihe abụọ a na Post ọ bụla, na Blog gị ga-agbawa na ewu ewu | Martech Zone
I huru ihe m mere ebe ahu? Na ngụkọta, cheesy, apụ-na-chaatị dị iche iche ejikọ njikọMa ọ rụ ọrụ. Nọ ebe a n'ihi na edere m aha blọọgụ n'ụzọ ụfọdụ. Nke a bụ atụmatụ bụ isi na saịtị dị ka Upworthy na Buzzfeed ma ha adọtala ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ site na ịhazigharị aha ha iji nwee isi ihe abụọ… ọchịchọ ịmata ihe na mmetụta uche.
ọchịchọ ịmata - site na ịkọ 2 ihe, uche gị amalitela iju ma ọnwụnwa ị ga-pịa bụ nke ukwuu.
Mmetụta - Eji m nlezianya jiri okwu ahụ ewu ewu na aha post. Kedu onye na-achọghị ka blọọgụ ha bụrụ ihe ewu ewu?
Ndị a 2 ọcha na a post aha na-eme nke ọma n'ụzọ nzuzu mana ị ga-eji nlezianya jiri ya mee ihe. Ike gwụla m na saịtị ndị ahụ m kwuru n’elu. Ọ bụ ezie na ha na-enwekarị ọdịnaya anaghị egbochi, anaghị m ahụ uru na ha ma na-efukarị oge bara uru na-agagharị foto nke nwamba ma ọ bụ na-elele akụkọ anya mmiri. Rịba ama: Enweghị m njikọ na saịtị ndị ahụ maka ụjọ ịhapụ uche gị maka nkeji iri anọ na ise.
Nke ahụ ọ̀ pụtara na ị ga-ezere ụzọ ahụ? Mba… mana echere m na ikwesiri igbochi utu aha igabiga elu ma weputa ihe ikwuru. Achọpụtara m na ọtụtụ saịtị ndị na-eji usoro ndị a anaghị eme ihe na-atụ anya nke aha ahụ. Tone ya ala ole na ole notches na ị ga-ahụ ya a kediegwu atụmatụ.
Ya mere… ka anyị kwuo na ị bụ onye na-ese foto na ị nwere post na ndụmọdụ 8 maka ịse foto. Kama ọkọlọtọ ol ' Atụmatụ 8 blog post, ị nwere ike ide post dị ka Mee Nzọụkwụ 8 Ndị Dị Mkpa Tupu Iwere Foto Gị Ọzọ, Ọ ga-eju gị anya na nsonaazụ ahụ. Ọchịchọ ịmata (ihe nzọụkwụ?) Na mmetụta uche (tụrụ!).
Ikekwe, ọ bụghị ihe dị ka ihe atụ dị ka ịse foto. Ma eleghị anya, ọ na-elele taya gị! Were ga-ede banyere ndụmọdụ n'aka ọkachamara arụzi. Kama… Ihe Nzuzo Ndị Ọrụ nke Na-agbatị Ndụ Taịa Na-enweghị Nchebe Na-achụrụ. The post ka nwere ike ịbụ banyere ịnọgide na-enwe ikuku mgbali na n'usoro gị taya… ma ị nwere ike ịgbanwe mkparịta ụka site na ịme ọpịpị n'ime ọchịchọ ịmata (ihe nzuzo?) Na mmetụta uche (nchekwa!).
Ewerela okwu m maka ya. Nye ya ogbugba na usoro ihe omuma gi nke ozo. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbawanye ọnụọgụ pịa, a ga-ahụkwu akụkọ gị karịa, kerịta karịa, ọ ga - eduga na azụmahịa ọzọ. Gaa na-agbawa na ewu ewu!
Tags: ọchịchọ ịmatammetụta uchedee post ahaWriting
N'ezie, ọ bụ eziokwu na linkbait “rụrụ ọrụ” n'echiche na m ebe a. Agụrụ m post gị. Mana agụghị m ya n’ihi aha ya — a gụrụ m n’ihi na amaara m onye ọdee akwụkwọ m wee chee na ị ga-enwe ike iwepụta nkwa gị.
Are na-enwetakwu okporo ụzọ n'ụzọ dị otu a, ị na-enwetakwa ụfọdụ ihe n'aka m n'ụdị ikwu, mana ana m enwe mmetụta n'ezie Mpekarị etinye aka na ika gị n'oge a. Achọghị m ịkekọrịta post a. Achọghị m na o nyere m ihe ọ bụla m na-amabughị.
Mana nke ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbaru ọsọ gị. Echere m na saịtị dị ka Upworthy na Buzzfeed na-anwa ime ka ọtụtụ nde mmadụ pịa site na ha enweghị mmasị na njikọ aka dị elu. Ha na-achọ echiche maka mgbasa ozi ha na mmata ọhụụ, ọ bụghị ndị na-azụlite nkwanye ùgwù maka nka na akuko miri emi.
Ndụmọdụ gị ọ bara uru? Ọ dabere na ebumnuche nke marketer. Ọ bụrụ na ịchọrọ ndị mmadụ nwere mmasị na "ihe nzuzo" nke ịgbagharị taya gị ma ọ bụ "ihe ijuanya" na ndụmọdụ iji iwu nke atọ, mgbe ahụ ikekwe usoro a bara uru. Mana amaara m maka onye na-azụ ahịa a, Ana m agbalị B NOTGH to pịa linkbait. Anọ m ebe a n'ihi na amaara m gị n'onwe gị. A ga-eleghara onye ọ bụla nwere aha a anya.
Okwu di egwu @robbyslaughter: disqus - i gha achota na ekwenyesiri m ike. Anaghị m eji atụmatụ a eme ihe na blọọgụ m ma ọ tụgharịrị m na blọọgụ ndị ọzọ. Achọrọ m ịde ederede kachasị mma, agbanyeghị, na-enweghị ịgafe site na ịkọ ndị mmadụ. Ọ bụ ezie na atụmatụ a akọwapụtara nwere ike ịdị n'elu - echere m na iji mmasi eme ihe na ịbanye n'ime mmetụta bụ isi… na-enweghị cheesy linkbait. Daalụ maka ịmalite oke mkparịta ụka!